News Collection: किन भएको रहेछ त पत्रकार पौडेलको हत्या ?
किन भएको रहेछ त पत्रकार पौडेलको हत्या ?
१) युवराज गिरी- जसले छतबाट धकेलेका थिए पौडेललाई
२) सोमराज ढकाल- होटलका सञ्चालक
३) मञ्जु ढकाल- होटल सञ्चालककी पत्‍नी
चैत २२ गते बिहानै खबर आयो- झापामा एक पत्रकारको निर्मम हत्या भयो। बसपार्क नजिकै पत्रकार यादव पौडलेको लाश भेटियो। पत्रकारका संस्थाहरु तात्तिए। मिडिया, विशेषतः टेलिभिजन तात्तियो। पत्रकारहरु घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै सडकमा आए। विज्ञप्तिबाजी भयो। बिहानैदेखि मैले त्यो खबर ‘फलो’ गरिरहेको थिएँ। दिउँसो नहुँदै त्यहाँबाट प्राप्त तथ्यले मलाई अचम्ममा पारिसकेको थियो।
समाचारमा भनिन्थ्यो- लाश होटलको पिँढीमा भेटिएको छ। टेलिभिजनहरु फुक्थे- छ जनाको समूहले घेरा हालेर धारिलो हतियारले प्रयोग गरी मारेको। ठाउँ फेरि बजार मै देखिन्थ्यो। बजार मै घेरेर मार्दासम्म कसैलाई थाहा नहुने, भोलिपल्ट बिहान मात्रै लाश भेटिने, किन यस्तो भयो? कसैले यो शंका निवारण गर्ने समाचार दिएनन्।
आज प्रहरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार घटना पत्रकारिताका कारण हैन, रक्सी र केटीका कारण रहेछ। १ गतेदेखि निस्कन लागेको भनिएको पत्रिकाका भावी सम्पादक पौडेलले भावी प्रकाशक युवराज गिरीकी गर्लफ्रेन्डलाई अंगालो हाल्न गएपछि झगडा हुँदा छतबाट धकेलेपछि मृत्यु भएको रहेछ। गिरीकी गर्लफ्रेन्ड फेरि अर्काकी पत्‍नी रहिछिन्, त्यही लजहोटलकी मालिककी पत्‍नी! समाचारहरुमा धारिलो हतियार प्रयोग भएको भनिए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा कुनै धारिलो हतियार प्रयोग भएको नदेखिएको भनिएको छ। केही मिडियाले त धारिलो हतियारले घाँटी रेटेको समेत भनेका थिए।
के छ प्रहरीको प्रतिवेदनमा ? प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै-
घटना विवरण :
मिति २०६८/१२/२२ गते राती १२:४५ बजेको समयमा जिल्ला झापा शनिश्चरे गा.बि.स.वडा नं.७ बिर्तामोड नयाबसपार्क स्थितमा रहेको पुर्बाञ्चल सेकुवा कर्नर एण्ड गेष्ट हाउस अगाडि जिल्ला मोरङ्ग सिजुवा गा.बि.स.वडा नं.९ घर भई हाल जिल्ला झापा अनारमनी गा.बि.स.३ स्थित बिर्तामोडमा डेरा गरी बस्दै आएका सञ्चारकर्मी यादव पौडेलको हत्या भएको ।
जाहेरी दरखास्तको विवरण :
मिति २०६८/१२/२५ गते मृतक यादव पौडेलको जेठान नाताका छबिलाल खतिवडाले निम्न ब्यक्तिहरु बिरुद्ध यस कार्यालयमा किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको । निम्न–
(१)जिल्ला मोरङ्ग सुन्दरपुर गा.बि.स.वडा नं.५ घर भई हाल जिल्ला झापा शनिस्चरे गा.बि.स.वडा नं.७ बिर्तामोड स्थित होटल पुर्बाञ्चल सेकुवा कर्नर एण्ड गेष्ट हाउसका संचालक अं.बर्ष ३९ का सोमनाथ ढकाल ।
(२) ऐ.बस्ने निजकै श्रीमती बर्ष २६ कि मन्जु भन्ने फुलमाया कार्की ढकाल ।
(३) जि.झापा शनिस्चरे गा.बि.स.वडा नं.५ घर भई हाल अनारमनी गा.बि.स.वडा नं.३ बस्ने अं.बर्ष ३४ को होटल व्यवसायी युवराज गिरी ।
(४) जिल्ला पाँचथर स्थायी घर भई हाल जिल्ला झापा अनारमनी गा.बि.स.वडा नं.३ बिर्तामोड स्थित कृषीथोक बजारमा डेरा गरी बस्ने ठेक्का पट्टाको कारोबार गर्ने बर्ण गोरो बर्ष अं.२८ को मदन राई ।
अनुसन्धान प्रकृया :
(१) तत्काल घटनास्थलमा फेला परेका ब्यक्तिहरुसँग घटनाको बारेमा सोधपुछ ।
(२) घटनास्थल आसपासका ब्यक्तिहरु र प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग सोधपुछ ।
(३) घटनास्थल तथा लाशको प्रकृतिको निरीक्षण र बिश्लेषण ।
(४) लाश पोष्टमार्टम रिपोर्ट ।
(५) प्राबिधिक बिश्लेषण ।
(६) घटनामा संलग्न लगायतको बिगतको पृष्ठभूमीको बिश्लेषण ।
अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरु :
(१) मिति २०६८/१२/२१ गते राती अं.१९ बजेको समयमा मृतक यादव प्रसाद पौडेल र युवराज गिरी बिर्तामोड नया बसपार्क स्थित होटल देउरालीमा पुगी मादक पदार्थ सेवन गरी अं.२२:०० बजे निस्किएको ।
(२) अं.२२:२० बजेको समयमा जि.ट्रा.प्र.का.बिर्तामोड पुगी ५/७ मिनेट बसि त्यहाँबाट घर जान भनि निस्किएको । घरमा नगई दुवै जनाको श्रीमती नभएको कारण पुर्वाञ्चल सेकुवा कर्नर एण्ड गेस्ट हाउसमा गई बस्ने सल्लाह गरी त्यसै तर्फ गएको ।
(३) अं.२३:०० बजेको समयमा दुबैजना पुर्बाञ्चल सेकुवा कर्नर एण्ड गेष्ट हाउसमा पुगी रात त्यही बस्ने योजनाका साथ पुनः मादक पदार्थ सेवन गरेको र सोहि क्रममा गित गाई रमाईलो समेत गरेको ।
(४) सोहि क्रममा प्रसङ्गबस मदन राईको सन्दर्भ आए पछि युवराज गिरीले मदन राईलाई फोन गरी २० मिनेट सम्म दुबै जना बिच फोनबाटनै बादबिवाद भएको ।
५) अं. २० बजेको समयमा मदन राई सहित ५/६ जना ब्यक्ति उक्त होटलमा आई ढोका खोल्न र युवराज गिरीलाई बाहिर निकाल्न भन्दै हल्लाखल्ला गरेको ।
(६) होटल साहु सोमनाथ ढकाल र सोही होटलमा ग्राहकको रुपमा बस्न आएका रोजन र योगेश रनपहेली समेतले सम्झाई बुझाई ढोका नखोली होटल बाहिरैबाट मदन राईको समुहलाई १०/१५ मिनेट पछि फर्काई दिएको ।
(७) बाहिर मदन राईको समुहले हो–हल्ला गरी रहदा युवराज गिरी पनि निहु खोज्दै अगाडि आए पछि होटल साहुले झै–झगडा हुन सक्नेदेखि युवराज गिरीलाई माथि जानुहोस् भनि माथि पठाएको।
(८) निज गिरीसँगै होटल साहुनी मन्जु भन्ने फुलमाया कार्की ढकाल र यादव प्रसाद पौडेल पनि माथि गएको।
(९)मन्जु र युवराज दुबैको भनाई अनुसार छतमा ३ जना पुगेको स्वीकार गरेको। होटलको छतमा पुगे पछि मृतक यादव पौडेलले मन्जु ढकाललाई अंगालो मार्न खोज्दा युवराज गिरी रिसाई दुबै बिच बादबिवाद भई तानातान भएको।
(१०) अनुसन्धानको क्रममा होटल साहुनी मन्जु भन्ने फुलमाया कार्की र युवराज गिरी बिच बिगत ११/२ बर्ष अघि देखि नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहि पटक–पटक शारीरिक सम्बन्ध समेत रहेको भनी निज मन्जु कार्कीले नै अनुसन्धानको क्रममा खुलाएको।
(११) बिवाद र तानातान हुने क्रममा युवराज गिरीले मृतकलाई उक्त होटलको छतबाट धकेली खसालि दिए पश्चात निजको भुईमा बजारिन पुगि मृत्यू भएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शी मन्जु भन्ने फुलमाया कार्कीले खुलाएको।
१२) पोष्टमार्टमको रिपोर्ट अनुसार पनि मृतकको शरीरमा कुनै धारिलो हतियार तथा अन्य चिजबस्तुले प्रहार गरेको नदेखिएको।
हालसम्मको अनुसन्धान निष्कर्ष :
(१) घटना पश्चात नियन्त्रणमा लिएका ब्यक्तिहरु मध्ये हाल सम्मको अनुसन्धानबाट घटनामा संलग्नता नदेखिएकाहरुलाई आजै छाडिने, बाकिको हकमा थप अनुसन्धान गरिने ।
(२) उक्त होटलमा युवराज गिरी र मृतक यादव प्रसाद पौडेल प्रबेश गरे पश्चात अन्य कोहि पनि ब्यक्तिहरु प्रबेश नगरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट खुलेको ।
(३) मृतक यादव प्रसाद पौडेललाई पक्राउ परेका युवराज गिरीले पुर्बाञ्चल सेकुवा कर्नर एण्ड गेष्ट हाउसको छतबाट खसाली हत्या गरेको ।
कानूनी प्रकृया/प्रहरी कार्य :
(१) किटानी जाहेरी दरखास्त पर्न आए पश्चात कर्तब्य ज्यान मुद्दामा मुद्दा दर्ता गरी पक्रउ परेका ब्यक्तिहरु मध्ये निम्न ब्यक्तिहरुलाई मिति २०६८/१२/२५ गतेबाट लागु हुने गरी सम्मानित झापा जिल्ला अदालतबाट दिन ५ म्याद लिई अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाईएको । जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित फरार अभियुक्त मदन राईको हकमा निज लुकिछिपी बस्न सक्ने संभाबित स्थानहरुमा ब्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरी खोजतलास गर्ने कार्य भइरहेको।
यो भयो प्रहरीको प्रतिवेदन। यो अनुसार त हत्याको कारण पत्रकारिता भएको देखिँदैन, बरु रक्सी र केटी कारण देखिन्छ। पत्रकार महासंघको टोली पनि छानबिन गर्न त्यहाँ पुगेको थियो। त्यो टोलीले चैँ के पत्ता लगायो त ? अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो पनि सार्वजनिक भएपछि घटनाको अर्को पाटो देख्‍न पाइन्थ्यो कि!
यदि प्रहरी प्रतिवेदन कै कुरा सही हो भने घटना लगत्तै प्रेस विज्ञप्तिको लर्को लाउनेहरु, पत्रकार सहिद घोषणा गर्नुपर्छसम्म भनी विज्ञप्ति निकाल्नेहरु, सडकमा उत्रिएकाहरु, बाँचुन्जेल सुको पैसा तलब नदिने, मरिसकेपछि दश लाख सरकारले दिनुपर्छ भन्दै २४ घण्टे अल्टिमेटम दिने मिडियाहरुले के जवाफ दिने ?
यो घटनाबारे आजको जनआस्था साप्ताहिकले यस्तो खबर छापेको छ-
२२ चैतको दिउँसै होटल ब्यबसायी संघका पूर्व अध्यक्ष युवराज गिरी र पत्रकार पौडेलेको भेट देउराली होटलमा भएको थियो । त्यहाँ तोङ्वा पिएर उनीहरु निस्किए । निस्कने बेलामा ‘हामी दुवैका श्रीमती अहिले यता छैनन, त्यसैले आज रमाइलो गर्न जाऔं’ भन्दै उनीहरु विर्तामोडका ट्राफिक इन्सपेक्टरकहाँ पुगे । ब्यस्त रहेका इन्सपेक्टरले आज हैन भोली रमाइलो गरौंला भने । त्यहाँबाट निस्केका उनीहरु मञ्जु ढकालको पूर्वाञ्चल सेकुवा कर्नरमा पुगे । मञ्जुले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार विगत तीन बर्षदेखि युवराज गिरीसँग उनको चक्कर थियो । त्यहाँ पुग्नासाथ पहिले उनीहरुले तलै वसेर खानपिन गरे । रात ढल्दै गएपछि मञ्जु र युवराज गिरी राती १ बजेतिर माथि उक्लिए ।
पत्रकार पौडेल पनि उनीहरुको पछिपछि माथि उक्लिए । युवराजले मञ्जुलाई छतमा पुर्‍याएर अंगालो मार्न थाले । यो देखेर यादवले भने- तपाईमात्र मोज गर्ने ? त्यसपछि गिरीले पौडेलेको हात झटकारे । तैले मेरो केटीलाई किन ताकिस भन्दै नसामा अर्ध वेहोस गिरीले यादवमाथि जाइलागे । रिसाएका युवराजले पौडेललाई छतको छेउमा लगि धकेलिदिए र उनी भईमा खसे ।
दुर्घटना भइसकेपछि मञ्जुका पति सोम ढकालले यादव पौडेलको मोटरसाइलक शव नजिकै ल्याईदिएर राखे ताकि झट्ट हेर्दा दुर्घटनाजस्तो देखियोस् । मञ्जुले दिएको यस्तो बयानसहित प्रहरीले प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।
यसैवीच झापाबाट एभिन्यूज टीभी र राजधानी दैनिकका लागि रिपोटिङ गर्ने पौडेलले ती संस्थाबाट एक रुपैयाँ पनि तलब नपाएको खुलासा भएको छ । क्रिया बसिरहेकी उनकी श्रीमतीले झापाका अन्य पत्रकारलाई रुँदै भनिन- तपाईहरुको पनि यहि हालत होला, एक रुपैयाँ पनि नपाउने यस्तो पेशामा किन लाग्ने ? काम गरेर पनि पैसा नपाउने यस्तो पेशामा नलाग्नुस भनेर पटक पटक सम्झाउँदा पनि श्रीमानले नमानेको उनले गुनासो गरिन् ।